Sidee Lacag Lagu Heli Karaa Inta lagu jiro FMLA? Suurtagal ma tahay?
Bogga ugu weyn Sidee Loo Bixiyaa Inta Lagu Jiro FMLA? Suurtagal ma tahay?
Wax soo saarka shaqaalaha ayaa shaki la'aan saameyn ku yeelanaya haddii caafimaadka xubinta qoyska uu khatar ku jiro. Iyadoo loo-shaqeeyayaashu ay fasax jireed siiyaan shaqaalaha jirran, maxaa la samayn karaa haddii qof aad jeceshahay uu buko? Ma jirtaa hab lagu helo lacag inta aad FMLA ku jirto?
Tani waa halka uu u yimaado Xeerka Fasaxa Qoyska iyo Caafimaadka (FMLA) si uu uga ciyaaro doorkiisa. Waxay siisaa shaqaalaha xaqa ay ku heli karaan fasax jirro si ay u daryeelaan xubin qoyska ka mid ah oo buka.
Si kastaba ha ahaatee, FMLA way ka gudubtaa taas. Wararka xanta ah ayaa sheegaya in dad yar ay lacag gargaar ka heleen FMLA laakiin taasi macquul ma tahay?
Wararka xanta ah ayaa sidoo kale sheegaya in shaqaalaha qaarkood ay helaan mushaaraadkooda oo dhan inta ay ku jiraan fasaxa FMLA.
Waanu caddayn doonaa inay run yihiin iyo in kale. Laakiin marka hore, waa maxay FMLA runtii?
Waa maxay FMLA runtii?
FMLA waa nidaam sharci-dejin ama sharci federaal ah oo la ansixiyay 1993 si loogu caawiyo shaqaalaha xubnaha qoyska ee jirran in shaqada laga dhaafo. FMLA waa wakhti weyn iyo dejiye walaac leh kuwa qaba walaalaha buka, carruurta, ama lammaanaha si ay si buuxda u daryeelaan iyaga oo aan la isku darin mas'uuliyadda iyo shaqada. Loo-shaqeeyayaashu waxay kuu oggolaanayaan inaad qaadato fasax jirro sida waafaqsan tilmaamaha FMLA.
Si kastaba ha ahaatee, ku dhawaad ​​dhammaan siyaasadaha shirkadu kuma siin doonaan fasax lacag ah intaad ku jirto fasaxa FMLA. Fasaxaaga FLMA waa fasax jirro si aad u daryeesho xubin qoyska ka mid ah oo si ku meel gaar ah u xanuunsan sidaas awgeedna wax mushahar ah ama mushahar ah lama bixiyo muddadaas.
Xeerka Fasaxa Qoyska iyo Caafimaadka (FMLA) dhanka kale, ma bixiyo wax shaqaale ah oo qaata fasax FMLA sababtoo ah waa sharci federaali ah oo leh nidaam sharciyeed. Robin Madell oo u dhashay dalka Mareykanka
News & World Report ayaa yidhi, "Inkasta oo FMLA lafteedu tahay mid aan wax lacag ah la siin, waxaa mararka qaarkood suurtogal ah - duruufo gaar ah oo gaar ah - inaad isticmaasho fasaxa mushaharka ah ee aad ku soo ururtay shaqada si aad u hesho lacag inta lagu jiro fasaxaaga FMLA".
Baro Sida loo iibsado Samsung Stock Direct 2022
Waa maxay shuruudaha kugu habboon FMLA?
Ma aha mid kasta iyo shaqaale kasta oo si aan kala sooc lahayn u dalbada fasaxa jirada ee FMLA inuu helo. Sidaa darteed, waxaa caqli-gal ah inaan baranno shuruudaha u qalma fasaxa FLMA. Habkaas, waxaad xitaa si ka sii fiican u baran doontaa FLMA.
XIDHIIDHKA: 10ka Makhaayadaha ugu Qaalisan Chicago
Waxa kale oo aad garan doontaa qaab aad u isticmaali karto fasaxa mushaharka leh ee aad ku soo ururtay shaqada si aad u hesho lacag inta lagu jiro fasaxaaga FMLA” sida uu qabo erayada Robin. Hoos waxaa ah shuruudaha ay tahay in la buuxiyo ogolaanshaha fasaxa FMLA:
Waxa kaliya oo aad xaq u leedahay inaad FMLA u qaadato si aad uga baxdo marka shuruudaha qaarkood la buuxiyo
Waaxda Shaqada ee Mareykanka ayaa qeexaysa shuruudaha ay tahay in lagu buuxiyo bixinta fasaxa jirada ee hoos timaada FMLA. Afar ka mid ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
1. Shaqaaluhu waa inuu noqdaa shaqaale si sharci ah ugu shaqeeya (si fiican loo diiwaangeliyey oo lagu daray liiska mushaharka) ee hay'adda marka hore.
2. Shaqaaluhu waa inuu shaqeeyay 1,250 saacadood (qiyaastii 156 maalmood oo shaqaynaya 9-5) sanad ka hor marka fasaxa FMLA uu bilaabanayo.
3. Shaqaaluhu waxa ay ka shaqaynayeen ururka ganacsiga ugu yaraan 12 bilood. Laba iyo tobanka bilood ee da'da shaqaalaynta waa in aanay noqon mid isku xigta gaar ahaan marka laga hadlayo shaqaale madaxbannaan ama qandaraasle.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay jirtay nasasho adeegga muddo 7 sano ah ama ka badan, tani ma soo kordhin karto goobtan.
4. Keliya shirkadaha leh ugu yaraan 50 shaqaale ayaa hoos imaanaya sharciga FMLA. Sidoo kale, shaqaaluhu waxay u baahan karaan inay ka shaqeeyaan meel u jirta 75-mayl raadis iyo shirkad buuxisa tan dambe.
Waxaa jira 3 xaaladood oo asaasi ah oo loo-shaqeeyayaashu ay mudnaanta siiyaan marka loo eego FMLA. Shaqaaluhu waa u qalmaan waana la ansixiyay haddii ay:
Loo baahan yahay in lala tacaalo xaalad caafimaad oo halis ah oo xubin qoyska ka mid ah ama in la daryeelo caqabad caafimaad oo shakhsi ahaaneed.
Hayso fasax rasmi ah oo laxidhiidha hawlgelin ciidan gaar ah ama daryeel xubin qoyska ka tirsan milatariga.
Ma u baahan tahay inaad ka tagto dhalashada ilmaha, daryeelka dhalmada ka hor iyo umusha ka dib. Aabuhu waxa kale oo laga yaabaa inuu qaato fasax si uu u daryeelo xaaskiisa ka dib dhalmada. Sidoo kale, fasaxa FMLA waxa uu quseeyaa marka ay jirto meelaynta ubadka ee shaqaalaha korsinta ama daryeelka korinta.
XIDHIIDHKA: 15ka Nidaam ee Amniga ugu Wanaagsan Guriga 2022
Waxa kaliya oo lagu siin karaa 12 toddobaad oo fasax FMLA ah muddo sannad ah - laakiin fasaxu waa lacag la'aan.
Xeerka Fasaxa Caafimaadka Qoyska waxa uu uga baahan yahay loo-shaqeeyahaagu inay u oggolaadaan booskaaga shaqada iyo caymiska caafimaadka kooxda la socota inay furmaan 12 toddobaad. Waxaad qaadan kartaa fasax si aad u daryeesho baahiyaha caafimaad ee xubin qoyska ka mid ah sida hoos timaada siyaasadda FMLA.
Dhibka ay leedahay ayaa ah in loo-shaqeeyayaashu aanay ku qasbanayn inay lacag ku siiyaan saacadaha aanad shaqayn wakhtigaas fasaxa jirada. Sidaa darteed, ma awoodi doontid inaad qaadato jeeg mushahar ah markaad fasax ku maqan tahay.
Waxa laga yaabaa inaad isticmaasho fasax lacag ah intaad ku jirto fasaxa FMLA.
Iyadoo qodobka kore la aasaasay, mid ayaa laga yaabaa inuu go'aansado inuu isticmaalo fasaxiisa gargaarka ee laga helay fasaxa jirrada ee hore, fasaxa safarka, ama nooc kasta oo kale oo fasax lacag ah oo aad dalbatay. Tani waa habka kaliya ee lagu helo lacag inta aad ku jirto fasaxa FMLA.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad keento caddaynta xaaladda caafimaad ee halista ah.
In kasta oo Xeerka Qoyska iyo Caafimaadka (FMLA) aanu uga baahnayn shaqaaluhu inay muujiyaan warbixin caafimaad ama caddayn xaalado caafimaad oo daran, si kastaba ha ahaatee, waa macquul in loo-shaqeeyayaashu dalbadaan. Eraygaaga kaligiis waxa laga yaabaa in aanu qiil u siin baahida laguu ogolaado fasaxa FMLA.
Loo-shaqeeyayaashu waxay ka codsan karaan shahaado caafimaad dhakhtarka adiga ama xubnaha qoyskaaga ku daaweynaya 5 maalmood gudahooda markaad codsato fasax jirro hoos yimaada FMLA. Loo-shaqeeyayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay aad u dheeraadaan si ay ula xiriiraan shaqaalaha daryeelka caafimaadka si loo xaqiijiyo sheegashadaada.
Muhiimadda Caymiska Deynta Ganacsiga
Sidee Loo Bixiyaa Lacagta Inta lagu jiro FMLA?
Sida horay loo sheegay, mid ayaa laga yaabaa inuu go'aansado inuu isticmaalo fasaxiisa gargaarka ee laga helay fasaxa jirrada ee hore, fasaxa safarka, ama nooc kasta oo kale oo fasax lacag ah oo uu dalbaday. Tani waa habka kaliya ee lagu helo lacag inta aad ku jirto fasaxa FMLA. Caadi ahaan shaqaaluhu ma helaan mushahar inta ay ku jiraan fasaxa jirada ee FMLA.
Si kastaba ha ahaatee, tiro yar oo shaqaale ah ayaa heli kara mushahar inta lagu jiro FMLA waa haddii ay ka shaqeeyaan gobol leh faa'iidooyin loo xilsaaray ama ay maareeyaan inay codsadaan amaah FMLA iyadoo ku xiran xaaladahooda.
XIDHIIDHKA: 13 Sameeyayaasha onlaynka ah ee ugu Fiican 2022: Hagaha Khabiirka
Waxaa jira qaar ka mid ah gobolada Mareykanka oo bixiya kaalmo dhaqaale inta lagu jiro FMLA haddii u-qalmitaanka uu buuxiyo barnaamijyada gobolka.
Barnaamijyada hindisaha gobolka waxay ku sheekeystaan ​​xaaladda caafimaad ee naafada ee shaqaalaha (Barnaamijyada naafanimada ku-meel-gaarka ah ee gobolka ku salaysan); Beddelka dakhliga ee fasaxa FMLA ee shaqaalaha si uu u daryeelo xubin qoyska ka mid ah (Barnaamijyada Fasaxa Qoyska Lacag-bixinta ah ee ku saleysan Gobolka); iyo sanduuqa degdega ah ee Coronavirus sanadka 2020 sida uu dhigayo Xeerka Jawaabta Fayraska Kowaad ee Qoyska (FFCRA)
Ururada qaarkood sida Koritaanka Faa'iidooyinka Qoyska waxay siin karaan deyn shaqaalaha inta ay ku jiraan fasaxa aan la bixin ee FMLA.
Waxay u oggolaan karaan lacag-bixinno daahsan dhowr sano sababtoo ah amniga shaqaaluhu wuxuu ka dhigayaa mid macquul ah inuu dib u bixiyo iyaga (amaahiyaha) ka dib dib u bilaabista shaqada. Dammaanad-qaadyadan la'aanteed, qaadashada lacagta amaahda inta aad ku jirto fasaxa FMLA maaha fikrad wanaagsan.
Akhri Sidoo kale: Sida Fudud Loogu Helo Spotify Premium
Qaadashada fasaxa jirada ee hoos timaada FMLA maaha mid caadi ah ama maaha mid fudud sida ay u muuqato. U-qalmitaanka iyo xaaladaha ku xeeran fasaxa jirada waa in lagu saleeyaa sharciga FMLA-da ayaa kuu ogolaanaya inaad qaadato ugu badnaan laba iyo toban toddobaad si aad u daryeesho mid ka mid ah xubnaha qoyskaaga ee qaba dhibaato caafimaad oo daran.
Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda ah inay tahay fasax aan mushahar lahayn ayaa faa'iido darro ku ah shaqaalaha gaar ahaan kiis ay shaqadu tahay isha kaliya ee dakhliga aasaasiga ah.
Waxaa jira tiro badan oo ah barnaamijyo gargaar maaliyadeed ah oo loo sameeyay in lagu caawiyo dadka FMLA si ay u qabtaan lacag dheeraad ah xilliga foomamka maqnaanshaha.
Laakiin waa in la qaado tallaabooyin fudud si loo dhimo kharashaadka wakhtigaas. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara helitaanka kaadhadhka cuntada, codsashada barnaamijyada xoojinta deynta, abuurista iyo hagaajinta miisaaniyad shakhsiyeed iyo kharashka ugu yar.
Sida Loogu Helo Lacag Bilaash Ah App-ka Cashuuraha Ah Tallaabooyinkan Fudud
10 Shirkadood oo Caymiska Nolosha ah oo aan lahayn Imtixaan Caafimaad…
10 Caymiska Ganacsiga Yaryar ee ugu Fiican 2022
Sida Loo Sameeyo gloss Bishimaha Loona Iibiyo Online
gloss bishimaha waa isqurxin aad loo jecelyahay oo dumar badan ayaa door bida in ay shandaddooda ku qaataan...
10ka Beddel ee ugu Wanaagsan Albaabada Xirmooyinka Laba-laaban
Marka ay timaado doorashada albaabada armaajooyinka, kaliya maaha in la helo midka hagaajiya qolka...
Markaa, waxa aad xiisaynaysaa inta daaciyiintu helaan. Waa caadi kaliya inaad ahaan lahayd, sida…